Gbasara Anyị | Shenzhen Speedy Technology Co., Ltd.
Guzobe na 2003, nke anyi ụlọ ọrụ amata na rụpụta nke dị iche iche jụrụ FANS Ugbu a n'ọrụ n'elu 200 pesonel, anyị ogbako ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 8,000 square mita na-enwe kwa afọ mmepụta ike banyere 6,000KPCS. Anyị na-kwara na-emepe emepe, amị na-ere elu arụmọrụ, a pụrụ ịdabere na àgwà na asọmpi price ngwaahịa niile nke ndị ahịa anyị.
N'ịbụ ndị nwere akara "Speedy" na "Coolerwinner", ndị Fans Speedy ejiriwo ọtụtụ ebe na ikuku na ebe ikpo ọkụ, dịka mpaghara IT, akụrụngwa egwuregwu, sistemụ ikuku, igwe ịgbado ọkụ, inye ike, ọgwụ na ngwa eletriki, akụrụngwa akụrụngwa wdg. .
Speedy nwere ike R & D otu, anyị na-n'ụzọ zuru ezu onwem dị iche iche ọkachamara ule ngwá na mmesho ụlọ ọrụ, dị ka Wind Ọwara, Auto Balancer, Ball agba Tester, Noise Tester, Short raygba Testing, Inter atụgharị obere circuit ule, ọma jijiji ule, High- Obere ule okpomọkụ na na. Anyị enweela ihe ịga nke ọma iji kwalite onwe anyị iji mezuo ọchịchọ ahịa kachasị mkpa. Ngwaahịa anyị agafeela asambodo nchekwa mba ofesi na mba na mpaghara dị iche iche dịka: UL, CUL, TUV, CE, CCC, IP55, ROHS ， wdg.
Iji izute ọhụrụ ngwaahịa mmepe mkpa, na-enye ezi na ike àgwà ngwaahịa niile ahịa, anyị guzobere "Ọgwụ na ịkpụzi Ngalaba" nke ụgwọ 8 ọgwụ ịkpụzi igwe, 1 EDM na ndị ọzọ na CNC igwe maka ịkpụzi na-emepe emepe. Ahaziri ọrụ nwere ike nyere.
Njikwa ogo na mmepe ngwaahịa bụ ntọala nke ụdị azụmaahịa Speedy. Speedy na-ege ndị ahịa ya ntị oge niile maka mmepe na-aga n'ihu, mepụta ihe ọhụrụ, ma mepụta ngwaahịa ọhụrụ. Anyị dị njikere mgbe niile ịnye ndị ahịa niile ihe ngwọta kacha mma. Anyị na-atụ anya na arụmọrụ dị elu, obere oge na-eduga, ọrụ dị mma, ogo a pụrụ ịdabere na ya na ngwaahịa ọnụahịa ga-egbo mkpa gị.
Jiri obi ekele na-anabata unu niile ịga leta ụlọ ọrụ anyị maka nghọta ka mma.
12cm Ọrụ Axial Fan, Metal Fan Nche, 172mm Ọrụ Axial Fan, Hvac Fan Puller, Plastic Fan Nche, Metal imi ihe Fan 80mm Nche,